BlackCoin စျေး - အွန်လိုင်း BLK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BlackCoin (BLK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BlackCoin (BLK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BlackCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 064 991.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BlackCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BlackCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BlackCoinBLK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0553BlackCoinBLK သို့ ယူရိုEUR€0.047BlackCoinBLK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0424BlackCoinBLK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0505BlackCoinBLK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.502BlackCoinBLK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.35BlackCoinBLK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.24BlackCoinBLK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.207BlackCoinBLK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0741BlackCoinBLK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0774BlackCoinBLK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.24BlackCoinBLK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.429BlackCoinBLK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.301BlackCoinBLK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.15BlackCoinBLK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.9.34BlackCoinBLK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.076BlackCoinBLK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.084BlackCoinBLK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.73BlackCoinBLK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.386BlackCoinBLK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥5.86BlackCoinBLK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩65.81BlackCoinBLK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦21.25BlackCoinBLK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.08BlackCoinBLK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.53
BlackCoinBLK သို့ BitcoinBTC0.000005 BlackCoinBLK သို့ EthereumETH0.000142 BlackCoinBLK သို့ LitecoinLTC0.000974 BlackCoinBLK သို့ DigitalCashDASH0.000564 BlackCoinBLK သို့ MoneroXMR0.000594 BlackCoinBLK သို့ NxtNXT4.08 BlackCoinBLK သို့ Ethereum ClassicETC0.00801 BlackCoinBLK သို့ DogecoinDOGE16.34 BlackCoinBLK သို့ ZCashZEC0.000601 BlackCoinBLK သို့ BitsharesBTS2.13 BlackCoinBLK သို့ DigiByteDGB1.89 BlackCoinBLK သို့ RippleXRP0.192 BlackCoinBLK သို့ BitcoinDarkBTCD0.00189 BlackCoinBLK သို့ PeerCoinPPC0.185 BlackCoinBLK သို့ CraigsCoinCRAIG24.94 BlackCoinBLK သို့ BitstakeXBS2.33 BlackCoinBLK သို့ PayCoinXPY0.955 BlackCoinBLK သို့ ProsperCoinPRC6.87 BlackCoinBLK သို့ YbCoinYBC0.00003 BlackCoinBLK သို့ DarkKushDANK17.55 BlackCoinBLK သို့ GiveCoinGIVE118.47 BlackCoinBLK သို့ KoboCoinKOBO12.44 BlackCoinBLK သို့ DarkTokenDT0.051 BlackCoinBLK သို့ CETUS CoinCETI157.96
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 23:10:01 +0000.